Wacdiyo, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waxaa laga yaabaa inaad weydiisato, "Waa maxay wacdintu?"
Jawaabta ugu fudud: hadal. Hal hadal iyo inbadan ayaa dhagaysta. Ujeedada khudbadan ayaa ah in la sameeyo qoraalkii hore ee Kitaabka Quduuska ah oo la fahmi karo. Tan waxaa ka mid ah ka jawaabista su'aasha: Muxuu aniga iyo noloshaydaba ​​qoraalkan noocan ah la leeyahay? Qof kasta oo si dhab ah u weydiiya su’aashan wuxuu la yaabi doonaa sida ku-habboon ee Kitaabka Quduuska ahi yahay. Hadalkani wuxuu kaloo doonayaa inuu dhiiro geliyo sida nolosheena oo kale (Eebbe) wuu ku guuleysan karaa si ka wanaagsan.
Sidee loola jeedaa taas? Halkan waxaa ah isbarbardhig: Haddii aad iibsato qalab farsamo maanta, waxay la imaanaysaa tilmaamo loo istcimaalo. Waxay sharraxaysaa sida loogu hawlgalo shaashadda guriga ama qalabka wareejinta. Haddii aan lahayn buugga tilmaanta ah waxaad u ekaan kartaa mid aad u da 'weyn. Noloshu way ka dhib badan tahay qalab kasta oo farsamo ah. Maxaad u heli weyday caawimaad iyo talooyin waqtiba waqti si ay si ka sii wanaagsan u shaqeyso?
Wikipedia wuxuu bixiyaa qeexitaanka soo socota ee ku saabsan wacdinta:
khudbad (Latin praedicatio) waa khudbad ka hadleysa munaasabad diini ah, badiyaa oo leh diin ku saleysan. Wacdigu wuxuu meel gaar ah ku leeyahay Axdiga Cusub iyo cibaadada masiixiga. Fiqi ahaaneed Christian, barista wacdi waxaa loo yaqaan homiletics. Wacdinta Ingiriisiga iyo Faransiiska micnaheedu waa "wacdin" (laga bilaabo Latin sermo: isbedelka hadalka, wada hadalka; casharka).
Bryan Chapell wuxuu ku qoray buuggiisa "Wacdinta Masiixa ee udhexeysa Masiixa":
Qorniin kasta oo Qorniinku leeyahay ayaa la sheegay inuu la xidhiidho nimcada Ilaah ee loo maro Masiixa. Qoraallada qaarkood waxay u diyaar garoobaan Ciise iyagoo matalaya baahida loo qabo badbaadada. Qoraallada kale waxay saadaalinayaan imaatinka Masiixa. Qaar kalena waxay ka turjumayaan wajiga badbaadada ee Masiixa. Qoraallada kalena waxay muujinayaan cawaaqibka madax furashada Masiixa, taas oo ah barakooyinka fara badan ee loo maro nimcada Ciise. Qoraallada qaarkood waxay u eg yihiin abuur aan wali soo bixin. Xidhiidhka uu la leeyahay Masiixa waa la arki karaa marka laga eego aragtida Axdiga Cusub.